आवरणFebruary 1, 2020
माघ २३ र २४ गते बसुन्धरास्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा दशौं विज्ञान प्रदर्शनी तथा करिअर मेनेजमेन्ट फेर हुने भएको छ ।
कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिसिंह केसी भन्छन्, ‘प्रर्दशनीमा उपत्यकाका विभिन्न कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थी स्वयंमले बनाएका ड्रोन, रोबोट, इलेक्ट्रोनिक सामग्री राखिनेछ ।’
उनका अनुसार साउथवेस्टर्न कलेजसहित ४० वटा स्टल हुनेछ । करियर मेनेजमेन्ट फेरबाट विद्यार्थीहरुले भविष्यमा अध्ययन गर्ने विषय तथा अवसरका बारेमा जानकारी हासिल गर्दछन् ।’
दशौं प्रदर्शनीसम्ममा विद्यार्थीको शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक शीपमा निखारपन आएको सहायक क्याम्पस प्रमुख केसीको बुझाइ छ । करीब ३ हजार विद्यार्थी साउथ वेस्टर्नमा अध्ययनरत छन् । उनीहरुको प्रयोगात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदर्शनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्याम्पस प्रमुख केसी बताउँछन् ।
उनका अनुसार उपत्यकाको उत्तरी भेग बूढानीलकण्ठ, सामाखुशी, नयाँबजार, कलंकी, चाबहिल, तीनकुनेलगायत क्षेत्रका स्कुल/कलेजका विद्यार्थीहरु सहभागी हुन्छ । ‘प्रर्दशनीमा २० हजार सहभागी गराउने लक्ष्य छ,’ सहायक क्याम्पस प्रमुख केसी भन्छन् ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेट कमी भएको सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिसिंह केसी बुझाइ छ । जसका कारण विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगात्मक शिक्षा कमजोर भएका छन् । यसै सेरोफेरोमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिसिंह केसीसँग रिभोसाइन्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हरेक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनीको आयोजना गर्न आवश्यक छ?
विद्यार्थीहरुको वौद्धिक क्षमता विकास गर्न हरेक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्को भनेको अन्य कलेजका विद्यार्थीहरुले गरेका प्रविधि प्रर्दशनीमा राखिने हुँदा हाम्रा विद्यार्थीले अवलोकन गर्ने अवसर पाउँछन् ।त्यसले उनीहरुको मनोभावनामा सकारात्मक सोच विकास हुने हामीले पाएका छौं । सोहीअनुसार हरेक वर्ष कलेजले विज्ञान प्रर्दशनी तथा करियर मेनेजमेन्ट फेर गर्दै आएका छौं ।
दशौं करियर मेनेजमेन्टसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीहरुको सोचाइमा कस्तो अन्तर छ ?
सुरुका अवस्था विद्यार्थीले त्यती ध्यान दिएको देखिएन । जव पहिले अध्ययन गरेका विद्यार्थी करियर मेनेजमेन्टको सूचना लिएर बाहिर अध्ययन गर्न गए हाम्रा विद्यार्थीहरु । त्यसपछि सपोर्ट भएको भन्ने कुरा पूर्व विद्यार्थीहरुको सुझाव हामीले पाएका छौं । जसअनुसार करियर मेनेजमेन्ट फेरलाई महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा हेरेका छौं ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यार्थीको सोच्ने तरिका कस्तो छ?
इन्टरनेट पहुँचका आधारमा विद्यार्थीहरुमाझ ज्ञानको दायरा फराकिलो भएका छन् । तर ती ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउने अवसर पाएका छैनन् । त्यसैकारणले उनीहरुको सोच्ने र चिन्तनलाई मूर्त रुप दिन विज्ञान प्रर्दशनीले भूमिका खेल्ने हामीले महशुस गरेका छौं ।
प्रर्दशनीमा मुख्य आकर्षण के-के हुनेछ ?
विद्यार्थी स्वयंले बनाएका सामग्री हुनेछ । उनीहरुको परिकल्पना मूर्त रूप दिने खालका नयाँ सामग्री हुनेछन् । उनीहरुको वीचमा प्रतिष्पर्धा गराउने तथा पुरस्कार दिने छौं । विद्यार्थीले बनाएका ड्रोन, सोलारबाट चल्ने, वातावरण संरक्षणसम्वन्धी जानकारी दिने प्रविधिलगायत हुनेछ ।
प्रतिष्पर्धा कसरी हुन्छ ?
इन्टर कलेज, इन्टर स्कूल र इन्ट्रा कलेज अनुसारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विज्ञको मुल्यांकन र भोटिङका आधारमा पुरस्कार दिइनेछ । अनुसन्धानमा लागेका संस्थाहरु पनि स्टल रहेनेछन् । उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिदैन ।
विज्ञान प्रदर्शनीमा सरकारी सहयोग कतिको हुन्छ ?
सरकारी निकायको सुभेच्छा छन् । हामीले गर्न नसकेका कार्य तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ भन्नेजस्ता कुरा शिक्षा अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । निजी स्रोतबाट प्रर्दशनी हुने गरेको छ । सरकारी सहयोग छैन ।
प्रर्दशनीप्रति निजीका प्रिन्सिपल र शिक्षकहरुको बुझाइ कस्तो छ ?
सकाररात्मक छन् । उहाँहरुको विद्यार्थी सहभागी हुनेहुँदा खुशी भएको हामीले पाएका छौं । प्रविधिको सूचना आदान-प्रदान हुने भएकोले उनीहरुको रुचीमा व्यापक हुँदै गएको छ ।
विद्यार्थीको रुचि कस्तो छ ?
उनीहरुको रुची झनै बढ्दो छ । विद्यार्थीले नयाँ कुरामा रुची राखेको देखिन्छ । कतिपय सामग्री उनीहरुले आफ्नै खर्चबाट बनाएर राख्ने गरेको पाएका छौं । यसबाट उनीहरुको रुची प्रष्टै हुन्छ ।
सेमिनार हुनेछ । जसमा वौद्धिक व्यक्तित्व, अमेरिकी दुतावास र अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रवचन दिनेछन् । करिअर म्यानेजमेन्टलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम हुन्छन ।